जीवनशैली – America Nepal
Friday, September, 2017
निर्मलले यतिका बर्षपछि मलाई खोज्दै आएको त्यो म्यासेजले म खुशी मात्र भइन, लाहुरेको प्रतिकार गर्ने हौसला पनि थपियो। एता विजय (लाहुरे)को ज्याजदी असह्य हुँदै गयो, उता निर्मलले म्यासेजमा भनेको कुराले विजयको क्रुरताले सिङ्गो लाहुरेजातीको चरित्र चित्रण गरिरहेको जस्तो लाग्यो । सबै लाहुरेहरु यस्तै हुँदा हुन् । यो संसारका हरेक लाहुरेहरुका जीवनसंगीनिहरु सुहागरातको रातदेखि
पप्पु गुरुङ्ग-दोधारा चाँदनी । करिब १ वर्ष पछि १५ वर्षिय लिला सुनार (नाम परिवतर्तन गरिएको) भारतको दिल्ली मोतिनगरबाट माईती नेपाल कञ्चनपुरले हिजो उनलाई दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ९ उद्धार गरेर ल्याएको छ् । लिलाले करिब १ महिना सम्म जून क्रुरता भोग्नु पर्‍यो त्यो संसारमै अकल्पनीय छ । यसमा कसैको दोष नभै आफ्नै दोष ठान्छन् । घरबाट फुपुको लहैलहैमा लागेर भारत नगएको भए यत्रो दु:ख
अमृता चौलागाई पाठक “टिकाटालो गरिदिउ” सबैजना निर्णयमा पुगे । बिहे त पहिल्यै भएको उसको र मेरो पनि । बिहे भने पनि टिकाटालो भने पनि कुरा उहि त हो सामाजिक बैधताको । सरसामानहरु जुट्न थाल उसैगरी, आफन्तलाई खबर गर्न थालियो उसैगरी, केटाको बारे सोधीखोजी हुन्थ्यो उसैगरी जसरी पहिले बिहेमा भएको थियो । सबैकुरा उस्तैगरी हुँदै थिए केवल मन उस्तै थिएन । कहाँ कहाँ तिक्तता कहाँ कहाँ खिन्नता । जती
उसको ब्वाइफ्रेण्ड र म
बिहान उठेर भर्खर दात ब्रस गर्दैथें। "टिननन् " मोबाइलको रिङ टोन बस्न थाल्यो। नया नम्बरबाट कल आइ रहेथ्यो। " यति बिहानै नया नम्बरबाट कसको कल हुन सक्छ ?" मनमनै कुरा खेल्न थाल्यो । मुखभरि टुथपेस्टको फिज थियो । यतिकैमा कल रिसिभ गर्दै बोलें, " हेलो" कलरको आवाज आयो , " हेलो, म तिम्लाई भेट्न चाहन्छु, दिउसो आउन सक्छौ ?" मैले उसलाई चिन्न सकिनं। केटाको आवाज, कतै सुने सुने जस्तो लाई रहेथ्यो, तर यसकै
ठमेलमा बाध्य भएर मैले शरीर सुम्पनु पर्यो :यौनकर्मी रमा केशी
राजधानी छिर्दा मसँग सपनाका चाङ थिए । प्रवेशिका परीक्षा उतिर्ण गरेर राजधानीको प्रवेश गर्दै गर्दा मैले सोचेकी थिएँ, ‘कुनै दिन राजधानीबाट ठूलो न्छे बनेर आफ्नो गाउँ फर्किने छु ।’ थाहा थियो, सपना सप्पैका पुरा हुँदैनन् । जसले आफूले देखेका सपनामा छाँद हाल्दै अगाडि बढिरहन्छ उसैले सपनालाई विपनामा परीणत गर्न सक्छ । अक्सर म सपना देख्ने गर्दथेँ । सपना देख्न मलाई रात पर्नु पर्दैनथ्यो ।
विदेशबाट फर्केपछि श्रीमानले दोस्रो विहे गरे, सन्तानको मायाले आत्महत्या गर्न सकिन्
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आएकी तारा गहतराज विस्वकर्माले जीवनमा धेरै दुख भोग्नु पर्यो। बाल्यकालदेखिनै दुखैदुखमा हुर्किएकी उनले सुखको अनुभव कहिलै गर्न पाइनन्। दुख गर्दै अरुको घरमा काम परेर हुँर्किएकी ताराको संघर्ष निकै मार्मिक छ। गाउँमै हुँर्किएकी ताराले राम्रोसँग पढ्न पाइनन्। उमेर बढ्दै गएपछि उनको विवाह भयो। विवाहपछिका दिनमा अझ अनको थाप्लोमा
कसले पो सोचेको थियो र..उसलाई कुनै दिन खलासी भएको देख्नुपर्छ !
करुणा देवकोटा, “दिदी ल ल आउनुस्, आउनुस् । काँसम्म जाने हो तपाईं ? ल ल आउनुस्…टाँडी, पर्सा, भण्डारा… टाँडी, पर्सा, भण्डारा…।” मेरो आडैमा हतारमा भएजस्तै गरेर उभिएकी एउटी अर्धबैँसे दिदीलाई गाडीको खलाँसीले एकै सासमा सोध्यो । जान त मलाई पनि थियो, तर ती दिदीजस्तो हतारिएको भने थिइनँ । गाडीमा बस्ने ठाउँ भए जाने, नत्र अर्को गाडी कुरेरै भए पनि सिटमा नै बसेर जाने सुरमा थिएँ म । तर, त्यो
यी ५ ‘गोल्डेन रुल’ पछ्याए करोडपति बन्ने पक्का !
काठमाण्डौ । प्राय मानिसहरु आफ्नो करिअरको सुरुवातका दिनहरुमा बचततर्फ ध्यान दिंदैनन् । तर, आर्थिक व्यवस्थापनको कोणबाट हेर्ने हो भने यो बानी गलत हो । हामीले बेलैदेखि बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । विज्ञहरुको भनाईलाई मान्ने हो भने तपाईंले बचत गर्ने काम त्यहीबेलादेखि सुरु गर्नुहोस्, जुन बेलादेखि तपाई कमाउन थाल्नुहुन्छ । हामी तपाईंलाई यस्तै पाँचवटा ‘गोल्डेन रुल’ बताउन गइरहेका
म काठमाडौंको लोकल बासिन्दा हो, खान बस्न गार्‍हो छैन: नायिका अशिष्मा नकर्मी
नेपाली सिने जगतमा 'बोल्ड एण्ड ब्युटिफूल' नायिकाको रूपमा परिचित छिन्- अशिष्मा नकर्मी । मनका कुरा निर्धक्क राख्ने उनी अहिलेकी चल्तीकी नायिका हुन् । रिचमण्ड एकेडिमीबाट एसएलसी र प्लस टु तहको अध्ययन पूरा गरेपछि सन् २००७ मा अमेरिका उडेकी अशिष्माले टेक्सासस्थित युएनटी युनिभर्सिटीबाट हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा ग्राजुयट गर्ने क्रममा ५ वर्ष अमेरिकामा बिताइन् । ३५ वटा म्युजिक
बेलैमा सचेत हुनुहोस्, यसकारण बिग्रिन्छन् श्रीमतीहरु!
काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बिग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती….., विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती…. जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र